FeedBurner ထည့်နည်း - အမေ့သားလေး.... @ mixxt
ဘလော့တွေမှာ subscribe လုပ်တာကိုတွေ့ဖူးမှာပါ။ မိမိ Email ကို ဖြည့်ပေးပြီး subscribe လုပ်ပေးရင် အဲဒီ ဘလော့မှာ ပိုစ့် အသစ်တင်တိုင်း မိမိ မေးလ် ကို ပို့ပေးတဲ့ စနစ်ပါ။ Google FeedBurner ကို သုံးပြီးပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ကျနော် အောက်မှ Feedburner လုပ်ပုံ လုပ်နည်း အဆင့်ဆင့် ကို ရေးပေးသွားပါမယ်။
၁။ ပထမဆုံး FeedBurner ကိုသွားပါ။ Email နေရာမှာ မိမိ ဘလော့ ရဲ့ Mail address ကိုထည့်ပြီး login ၀င်ပါ။
၂။ FeedBurner ရဲ့ Page ကို ရောက်သွားပါလိမ့် မယ်။
၃။ Burnafeed right this instant. Type your blog or feed address here: ဆိုတဲ့ နေရာမှာ မိမိ ဘလော့ ရဲ့ Address ကို ရေးပေးပါ။ ပြီးလျှင် Next.
၄။ Blog Title ကိုဖြည့်ပေးပြီး Next နဲ့ပဲ ဆက်သွားလိုက်ပါ။
၅။ မိမိ ပေးထားတဲ့ Title နဲ့ Page ကိုရောက်သွားပြီ ဆိုရင် Publicize Tab ကိုသွားပါ။ နောက် Email Subscriptions ဆိုတဲ့ Link ကိုသွားပါ။ ရောက်သွားရင် Activate လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ Code တွေရလာပြီဆိုရင် ကော်ပီ ကူးပြီး မိမိ ဘလော့ ရဲ့ Widgets ကိုသွားပါ။ Sidebar မှာ Text အသစ်ထည့်ပေးပြီး Paste လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ အဲဒါဆိုရင်တော့ GoogleFeedburner ကပြည့်စုံသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်။